ऊ पहाडको टुप्पामा रहेको त्यो मन्दिरमा पुग्नलाई हिँडेको छ । � ाडो उकालो र साँघुरो ढुंगे बाटोले गर्दा त्यहाँसम्म पुग्न विकट नै छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि त्यहाँ साक्षात ईश्वर बस्छन् र त्यहाँ पुगेपछि आफ्नो कुनै पनि कामना पूर्ति हुन्छ भन्ने आस्था र प्रचलित विश्वासका कारण उसले मन्दिरमा पुग्नुलाई आफ्नो गन्तव्य बनाएको छ ।
यात्रा थाल्दा ऊसँग सहयात्रीहरुका रुपमा एउटा निकै � ूलो जमात थियो । कस्तै गाह्रो साह्रो परे पनि उनीहरुको साथमा आफ्नो क� िन र लामो यात्रा सजिलै छिचोल्न सकिन्छ भन्ने आशामा ऊ हिँडिरहेछ । हिँड्दै जाँदा थाकेर, अल्मलिएर र अत्यास लागेर धेरैजनाले यात्राबाट वीचैमा उसको साथ छोडिसकेका छन् । निकै � ूलो भीडको रुपमा रहेका सहयात्रीहरु घटेर दुइतीन जना मात्र बाँकी हुँदा पनि उसले देखिरहेको छ कि उनीहरुभन्दा अलि पर अलि दुब्लो देखिने एकजना निरन्तर उसँगसँगै हिँडिरहेको छ । हुँदाहुँदा अन्तमा उसँग हिँड्ने मात्र त्यही दुब्लो व्यक्ति रहन गयो । ऊ आफैले पनि यात्राको किचलो र क� िनाईसँग आजित भएर निकैपल्ट यात्रा छोड्न खोजॆको थियो । "यहाँसम्म त पुगिनैसक्यौ फेरि हरेश किन खान्छौ ? हेर कोही नहुँदा पनि म छु तिम्रो साथमा ।" निराश भै अडिन खोज्दा साथमा आउने साथीले सम्झाउँथ्यो । ऊ बढ्यो, बढ्दै गयो ।
धेरै दुखः कष्ट आए , त्यो साथीले उसको साथ छाडेन र अन्तमा उसले टुप्पामा पुगिछाड्यो । अथाह शान्ति थियो त्यहाँ र ऊ कामनारहीत भैसकेको थियो । कृतज्ञ उसले फर्केर आफ्नो उत्साह बढाउने साथीसँग उसको परिचय माग्यो । "मलाई चिनेनौ ? म हुँ तिम्रो विश्वासिलो साथी, तिम्रो आत्मविस्वास ।" साथीले उसको काँध थप्थपाउँदै हाँस्दै जवाफ दियो ।